आदरणीय डिन सर नमस्कार !
यो पत्र लेखिन्जेल सम्म म आराम छु आशा छ हजुर पनि आरामै हुनुहुन्छ होला ?
आज एउटा बिन्ती चढाउन यो पत्र लेख्दै छु। गएराती तेस्रो बर्षमा अध्ययनरत एउटा भाइको होस्टेल भित्रबाटै राती मोटरसाइकल चोरी भयो हिजोकै मितिमा सुकाउन टागेको थुप्रै कपडा हरायो।
यो चोरीको पहिलो घटना होइन, मोबाइल अनि ल्यापटप हराउनु त सामान्य जस्तो लाग्न थालिसक्यो, प्रथम सेमेस्टरमा हुदाँ कोठामा चार्जमा राखेको मेरो मोबाइल रातको समयमा हराएको थियो, क्याम्पस प्रशासन देखि प्रहरी सबैलाई रिपोर्ट गरें तर सामान भेटिएन।
क्याम्पस प्राङ्गण भित्र डेटिङ् बस्ने अनैतिक हर्कतहरु गर्ने, गाजा मात्र होइन लागुपदार्थ ‍सेवन गर्ने अड्डा बनेको छ। चित्तल त दिनहुँ मारिन्छन् ।
विद्यार्थी नभएको बेलामा ढोका समेत फोरेर गाजा सेवन गरेको भेटिन्छ।
हाम्रा चेलिबेटीलाई पछ्याउदै होस्टेलसम्म बाहिरी केटाहरु आउछ्न्, परिक्षा दिएको विद्यार्थीको नतिजामा अनुपस्थित लेखेर आउँछ, पुन परिक्षा दिन लगाइन्छ ! दुख पनि कति दिन सकेको हो, कति दिन सहेर बस्ने हो ?
यस विषयमा सयौ पटक क्याम्पस प्रशासनलाई भन्दा पनि कुनै कदम नचाल्नुको कारण के हो ? डिनलाइ भन्नुस भन्दा डिनलाइ हेटौंडा क्याम्पसको मतलब नै छैन हाम्रो कुरै सुन्नु हुन्न भन्ने जवाफ आउँछ ।
अब हामी के गरुम डिन साब ? प्राविधिक कलेज यस्तै हुन्छ भनेर भर्ना लिनु भएको होर डिन सर ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक अनि प्राविधिक कलेजको अवस्था यस्तो दयनीय हुदाँ यो जिम्मेवार पदमा बसेर कुनै चासोँ नै नदेखाउँदा हजुरलाई हिनताबोध हुदैन र डिन सर ? यस्तो पाराले पनि कुनै क्याम्पस चल्छ र डिन सर?
तसर्थ डिन सरलाइ मेरो अनुरोध अब अर्को शैक्षिक सत्र देखि वन बिज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा क्याम्पस क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्ना नै नलिनु होला ।
शैक्षिकको दुर्दशा त हजुरलाई थाहा नै छ।अब त विद्यार्थीको जनधनको सुरक्षा हुँदैन , ४ बर्ष कुन दिन मेरो के सामान कुन दिन चोरी हुन्छ अर्को के काण्ड मच्चिन्छ भन्ने डरमा मात्र बित्छ यस्तो अवस्थामा हामी मानसिक रुपमा बिचलत भएर बस्नु कि पढ्नु ? म जस्ता कयौं विद्यार्थीको भविष्य हजुरको हातमा छ । बेलैमा सोच्नुहोस ।
वन बिज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: आइतवार, माघ ११, २०७७ १६:४७:४०
प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईंलाई के भनेर सम्बोधन गरौँ ?
सार्वजनिक शिक्षा समस्या र समाधान